Iko kupi kwekudyara kuti uwane iyo yakanaka purofiti | Ehupfumi Zvemari
Ehezve, 2018 harisi iro rakareruka gore kuti uwane yakaringana kudzoka pane kuchengetedza. Zvigadzirwa zvehupenyu hwese mune zvakajairika misika yezvemari kana zvirevo senge hunyanzvi semari chaiyo? Uyu ndeimwe yemibvunzo yakawanda iyo varimi vepakati nepakati varikazvibvunza pachavo nezve mamiriro chaiwo avo pachake mari yemari. Nekudaro, kune mamwe makiyi akakodzera anozokubatsira iwe kusarudza imwe kana imwe modhi yekudyara. Kunze kweprofile iwe yaunopa sevashandisi mukirasi ino yezvigadzirwa zvemari.
Mhando dzakasiyana dzekudyara dzinochinjika kune imwe neimwe yekubatana nguva uye pazvinenge zvichidikanwa kuti iwe uzive zvakasarudzika zvemhando yega yega yemari. Kwete pasina, zvichave zvakakodzera ongorora mikana kuti misika yezvemari iratidze iwe uye nei zvisingaiti, zvakare kutyisidzira panguva ino. Kuburikidza nemaviri paramita iwe unozogona kuona kuti ndechipi chigadzirwa chakanakira iwe. Kusvikira pakuti iwe unenge uri muchimiro chiri nani chekuita kuti zviwanikwa zviwane purofiti mukati megore rino.
Ehezve, kana iwe uchinyatsoda kusimudzira mashandiro emabasa, haufanire kungozvimisikidza wega kune maquity kana mari yakatarwa. Kana zvisiri, chii chaunofanira kuita vhura misika mitsva zvemari uko iwe ungave nemukana wekuzadzisa purofiti yezviroto zvako. Kunyangwe iri pamutengo wekutora dzimwe njodzi mukufamba kwaunovhura kubva zvino zvichienda mberi. Icho chinhu icho iwe chaunofanira kugara uchiverenga kana iwe uchida kuve unonyanya kuda mune zvaunoshuvira muhukama hwako nenyika inogara yakaoma yakaoma yemari. Iwe unoda kuziva here kuti ndezvipi zvirevo zvaunazvo kuzadzisa izvi zvinodikanwa zvinangwa? Zvakanaka, nyatsoteerera nekuti tiri kuzokupa imwe imwe pfungwa yekuti unogona kubatsira zvikuru mumwedzi iri kuuya.
1 Kubatsira: yakatemwa kana inoshanduka mari?
2 Mari yemisika: dzimwe njodzi
3 Mazhinji matsva ekudyara
4 Ikozvino maitiro: cryptocurrencies
5 Bhizimusi musika simuka
6 Pachagara paine goridhe
Kubatsira: yakatemwa kana inoshanduka mari?
Uku ndiko kunetsa kusingagumi kune vakawanda varimari vadiki nepakati varimi. Mupfungwa iyi, sarudza iyo bhegi yeEuropean Iyo inogona kuve yakanaka danho rinokubatsira iwe kufambisa zvishuwo izvi. Nekudaro, iyo yekutanga kota yegore yanga isiri sezvaitarisirwa nevamwe vevaongorori vezvemari. Kusvika padanho rekuti akawanda masheya indices anofamba munzvimbo dzisina kunaka. Semuenzaniso, Ibex 35 inosara ingangoita 10% mumwedzi mitatu yekutanga yegore. Chero zvazvingaitika, ndiyo imwe nzira iyo inogona kupa yakawanda yakanaka kudzoka kwegore rino. Kunyangwe zve izvi, iwe unenge usina sarudzo kunze kwekuva unosarudza kupfuura nakare kose mukusarudzwa kwemitengo yemusika wemasheya.
Nezve mari yakatarwa, zvese zvinoenderana ne mari yemitemo inoitwa nemabhangi epakati enzvimbo yega yega yezvehupfumi hwenyika. Mupfungwa iyi, zvese zvinoratidza kuti chiitiko ichi chinoratidzwa nekupera kwenhamba yekuwedzera yeEuropean Central Bank (ECB). Uye zvechokwadi kukwira kunogona kuitika muzvikwereti kunogona kukanganisa misika yemari yakatarwa. Asi mupfungwai? Zvakanaka, zvakapusa uye kana mitengo ikakwira, kukosha kwezvisungo kunodzikira. Kusvika padanho rekuti mamwe mamiriro anogona kugadzirwa uko purofiti inogona kunge iri nani pane muzvikwereti kana zvinopesana.
Mari yemisika: dzimwe njodzi
Hapana mubvunzo kuti pamusika wemari une njodzi huru uyo ​​unoratidzwa nekuchinja kunoramba kuripo pakati pekukosha kwemari munyika. Iko iyo volatility ndiyo dhinomineta yekufamba kwavo. Semisika mishoma yezvemari zvinoitika. Asi panguva imwechete iyo inokugadzira iwe kuti iwe ugone kuwana yakakwira kudzoka kuvhura mashandiro mune aya akakosha misika. Nekudaro, musika wekuchinjana kwekune dzimwe nyika haukurudzirwe kune epakati kana marefu-marefu mashandiro. Asi pane izvo zvinopesana, zvekumhanya zvakanyanya uko kwaunowana mihombe mibairo. Kana kuti pamwe ungarasikirwa nechikamu chakanaka chemari yako.
Dambudziko hombe raunotarisana naro mune ino mhando yekushanda ndeyekuti iwe unoda a kudzidza kutenderera misika iyi. Izvo hazvina kufanana nekutenga nekutengesa masheya pamusika wekutengesa, asi zvakasiyana. Kana iyi isiri yako, zvichave zvirinani kusarudza dzimwe nzira dzinogutsa pane zvaunofarira. Iyi midziyo yemari inoda chimiro chakanyatso tsanangurwa kana iwe usiri kuda kuita chisina kujairika chikanganiso chinotungamira kumamiriro asingadiwe semudyari mudiki nepakati.
Mazhinji matsva ekudyara
Mukati meboka iri makarongedzwa nzira dzakasiyana dzekunzwisisa kudyara. Iko zvikwereti pakati pevanhu kana kutenga kwezvivakwa zvinogona kumiririra mukana wakanakisa wekuwana zvakakwana kudzoka. Kubva pane ino mamiriro ese, iyo inonzi P2P inzira yakanaka kwazvo yekugamuchira mubereko gore rega rega munzira inobatsira, isina njodzi uye chii chakakosha kugadziriswa. Kusvika padanho iwe raunogona pfuura chikamu che5%, chikamu icho zvigadzirwa zvakasiyana zvebhangi zvisingasvike mune chero zviitiko zvacho.
Hazvina kukosha kudiki mukudyara ndiko kutenga zvivakwa. Iyo yakasarudzika iyo vanoisa mari vanotendeukira kwairi kunatsiridza kufarira kwemari yako. Hazvishamise kuti iwe uri muchinzvimbo chekutora mukana wekukwira kwezvivakwa mumwedzi ichangopfuura. Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti vanoumba nzira chaiyo yekuchengetedza mari uye kugadzira purofiti yenguva refu. Sevamwe vatengesi vanga vachisimukira avo vanoona muzvidhinha mhinduro kumatambudziko avo emari kana kuti kuita purofiti.
Ikozvino maitiro: cryptocurrencies
Iyo ndiyo ichangoburwa yekudyara fever asi ine njodzi dzakakwirisa idzo havazi vese vatengesi vanogona kutakura. Nekudaro, zviri nyore kuti iwe urambe uchifunga kuti ndiyo isina kugadzikana uye isina kuchengetedzeka zano rekudyara rauinaro parizvino nekuti haina mutemo. Iwe unogona kuwana zana muzana yemari, asi nenzira imwechete ikusiyire yakaenzana huwandu hwemari munzira. Iko kukanganisa kukuru kuti iwe unoteya yakawanda mari mune imwe yechokwadi mari yeaya maitiro. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuwana zvimwe zvisina kunaka zvakanyanya kushamisika.
Iyo inoitirwa mafambiro mumisika yakaipa kwazvo uye inozivikanwa ne mihoro haibatike. Iwe haufanire kutorwa nerudzi urwu rwekudyara mari nekuda kwekuti iri mufashoni, sebhabhu rinogona kunge richigadzira iro rinogona kukanganisa zvakanyanya nzvimbo mumusika uyu unoshamisa uye une hunyanzvi. Ehezve, haina kukurudzirwa kune ane mwero ekudyara profiles. Nekuti zvirokwazvo unogona kurasikirwa nemari yakawanda kubva zvino zvichienda mberi. Usakanganwa kana iwe usiri kuda kuita zvikanganiso zvakakura.
Bhizimusi musika simuka
Ndiyo imwe yesarudzo dzauinadzo gore rino, kunyange zvakadaro kubva munzira dzakasiyana zvakanyanya. Iko mukana wekudyara mumakambani matsva iri sarudzo chaiyo yaunofanirwa kugadzirisa mashandiro emabasa ako. Kune rimwe divi, iwe unogona kutenga masheya emakambani emarudzi mazhinji ayo anogara achipa kushomeka. Chero zvazvingaitika, iri kirasi yekuvhiya yakaoma kwazvo uye iyo inofanira kukuita wakangwarira kwazvo. Nekuti njodzi dzakakwirira kupfuura kuburikidza nedzimwe nzira dzakajairika dzekudyara.
Kune rimwe divi, aya marudzi ekubhejera anoda yakasimba bhizinesi kudzidziswa iwe yausingakwanise kuunganidza mune ese kesi. Ichi chinhu chinoita kuti chive chisiri chemuenzaniso kune chero mudiki uye wepakati investor. Kunyangwe kuita purofiti kuchikubatsira iwe mune zvaunofarira, uyezve zvirinani kupfuura mune zvakagadziriswa kana zvinowaniswa zvigadzirwa zvemari. Ichi ndicho chimwe chezvipingamupinyi zvikuru pakusarudza iyi yemhando yekudyara.
Pachagara paine goridhe
Sesarudzo yekupedzisira, simbi yeyero inogara iripo, iyo inoshanda senge tsika yechinyakare yekutizira munguva dzisina kunaka dzemisika yemari. Iwe haugone kukanganwa kuti purofiti yayo mukati megore rino iri pamusoro pegumi muzana, iine mamiriro ekumusoro anogona kuramba achienderera mukati megore rose. Asi kune rimwe divi, iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti iyo mwero wekukwira neUnited States Federal Reserve (FED) uye kuwedzerwa kwemutengo wedhora reUS kunogona kupa kumanikidza kwakaderera munzvimbo dzakachengeteka dzehunhu par kugona.
Icho chikumbiro chekudyara icho chinoenderana nezvose zvinodiwa. Pakati pezvimwe zvikonzero nei iwe uchigona kutenga goridhe chairo kana zvinopesana nenzira chaiyo. Nemaitiro eimwe neimwe yemhando dzekudyara. Seimwe nzira yekudyara kwechinyakare, kunyanya kana misika yemari yemari isiri kuenda panguva dzakanakisa. Iko chikamu chikuru chehupfumi hwenyika chinotizira kuti zviite purofiti zvinhu zvavo zvakavanzika.
Nekuti inogona kuzadzikisa inonakidza kwazvo purofiti ratios iyo mune dzimwe nguva inogona kusvika pamatanho anosvika makumi mashanu muzana, kana kutonyanya kuda. Kunge zvimwe zvakakosha simbi dzakadai se sirivheri, palladium kana platinum, pakati pevamwe vavo. Zvirinani iwe unogona kuseka yako portfolio yekudyara pane ino yakasarudzika uye inobatsira mari yemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Iko kupi kwekudyara kuti uwane iyo yakanaka purofiti